Isifundo malunga nenkqubo ye-asidi ye-leaching ye-Co Mo esekwe kwi-hydrotreating catalyst
Indlela yokuphendula umphezulu (RSM) yayisetyenziselwa ukufundisisa inkqubo ye-nitric acid leaching yenkunkuma Co Mo esekwe hydrotreating catalyst. Iinjongo zolu phononongo yayikukungenisa i-CO kunye neMo ukusuka kwikhathalogu echithwe kwisinyibilikisi ngohlobo lokunyibilika kwamanzi, ukulungiselela ukucoceka okulandelayo ...
Ukulungiswa kwe-carbon molecular sieve evela kwi-carbon fiber
Ukuba amachaphaza e-jujube e-huanbingwei kunye ne-CMB adityaniswe kunye, izinto ezintsha ziya kuba nezi zinto zilandelayo: akukho luthuli luya kwenziwa xa lisetyenziswa. Iyaphuculwa yi-5-FU. Iicarbon fiber molecular sieve ezinesakhono sokutshintshiselana nge-ion zinokulungiswa ngokuqhubeka nokunyanga ngokwasemzimbeni nangokweemichiza. I ...
Iipropathi kunye nokusetyenziswa kwekhabhoni esebenzayo
Ikhabhoni esebenzayo: luhlobo lweentengiso ezingezizo polar ezisetyenziswe ngakumbi. Ngokubanzi, kufuneka ihlanjwe nge-hydrochloric acid, ilandelwe yi-ethanol, emva koko ihlanjwe ngamanzi. Emva kokumisa kwi-80 ℃, inokusetyenziselwa ikholam chromatography. Granular isebenze carbon yeyona ndlela ilungileyo ikholamu ch ...